बेहुला बिनै बिहे !
Purba Sandesh	२३ आश्विन २०७८, शनिबार	21 Views
सामान्यता एक पुरुष र एक महिलाबीच विवाह हुन्छ । बदलिदो समाजमा तेश्रो लिंगी, समलिंगीबीच पनि विवाह हुदैँ आएको छ । विवाहको बदलिदो स्वरुपमा पुरुषले पुरुषसँग, महिलाले महिलासँग मात्र नभई बस्तु, कार, जनावरसम्म विवाह भएको सुन्न देख्न पाइन्छ । तर के कुनै मानिसले आफैसँग आफ्नो विवाह गर्ला ?
नूनको मुल्य पौने १२ लाख
६ महिनाका बालकले वाटर स्किइङमा विश्व कीर्तिमान कायम
हराएको औँठी ५५ बर्षपछि फेला
ट्रक चालकको तलब वार्षीक १ करोड